REENOEMANN: ဝဋ် ဆိုတာ လည်တက်ပါတယ်
Posted by Ree Noe Mann at 12:51:00 AM
တစ်ဦးမေတ္တာ တစ်ဦးမှာ ဆိုသကိုးဗျ မောင်ရီနိုရ။ သူတို့ခမျာမှာလဲ အသဲနှလုံးလေးတွေ ပါခဲ့လေတော့။
အဲ့လိုတွေ ရှိတယ်လေ ..
ကိုရီနို ခုမှ ကြားဖူးတယ်ပေါ့ .. !!!
ဒီမှာလည်း အများကြီးကို ..
ပေါ်တင်တွေ ရှိသေးတယ် ..
ကြားတာတော့ ကြားဖူးပါတယ် ညီမရယ်။
ကိုယ့်အမျိုးထဲမှာ ဆိုတော့ အံ့သြသွားလို့ပါ။